नेपालमा थप २०१ काेराेना संक्रमण ६४ जिल्लामा - जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी - Maxon Khabar
Home / News / नेपालमा थप २०१ काेराेना संक्रमण ६४ जिल्लामा - जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
नेपालमा थप २०१ काेराेना संक्रमण ६४ जिल्लामा - जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
२१ जेठ, काठमाडौँ । बुधबार एकैदिन २०१ जना काेराेना भाइरस संक्रमणका नयाँ विरामीहरु भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाका अनुसार बुधबार थप २०१ जनामा संक्रमण देखिएको छ । याेसँगै नेपालमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या २ हजार ३ सय पुगेकाे छ । कोरोनाको संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचाररत दोलखाका ७६ वर्षीय पुरूषको उपचारको क्रममा बुधबार मृत्यु भएको हो। योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा १२ जना डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या २७८ पुगेको छ ।
जसमध्ये अहिलेसम्म ९ जनाको ज्यान गएकाे छ कुल ६४ जिल्लामा कोरोना संक्रमणका बिरामी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ताप्लेजुङका ३ जना पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ। झापाका झापाका १ जना, पाँचथरका एकजनामा पनि संक्रमण देखिएको छ। सुनसरीको भोक्राहाका ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। उनीहरु सबै क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यसैगरी कोशी अञ्चल अस्पतालमा गरिएको परीक्षण धनकुटाको सहिदभूमिका एकजना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। बीपी प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरीको त्रिभुजको एकजनामा पुष्टि भएको छ। रुपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा ९५ जना संक्रमित भेटिएका छन्। कपिलवस्तुको मायादेवी र शुद्धोदनका ६७ जना रहेका छन्। जसमा ११ देखि ३७ वर्षीयसम्म रहेका छन्। कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा ५ जना संक्रमित भेटिएका छन्। उनीहरुमा झापाको कमल गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका १ जना, तेह्रथुम आठराईका १ जना, सुनसरीको बराहक्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा रहेका १ जनामा संक्रमण देखिएको छ। नारायणी अस्पताल पर्सामा गरिएको परीक्षणमा पर्साकै ७ जना संक्रमित भेटिएका छन्। सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा ३ जना संक्रमित भेटिएका छन्। उनीहरुमा १० जना महिला रहेका छन्।
१ वर्षीय बालकदेखि ८० वर्षीयसम्मका छन्। रुपन्देहीमै पाल्पाका २ जना संक्रमित भेटिएका छन्। रुपन्देहीको रोहिणी र मर्चवारका २६ जनामा पनि संक्रमण भेटिएको छ। सेती अस्पताल धनगढीमा ५ जा पोजेटिभ भेटिएका छन्। जसमा कैलालीको गौरीगंगा र धनगढीका रहेका छन्। डोटीका पनि दुईजना पुरुषहरु संक्रमित रहेका छन्। उनीहरु २२ र २५ वर्षीय रहेका छन्। पछिल्लो दिनहरूमा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर ह्वात्तै बढेर जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल (हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आज प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको विज्ञहरुसँग हुन लागेको सल्लाहमा पनि यस विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा संख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले तयार पारेको जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट पास हुनासाथ लागू हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले कोभिड-१९ सम्बन्धी ल्याएको 'हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान' अन्तर्गत २ हजार सक्रिय केस पुगेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ। नेपालमा कोभिड-१९ संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले कोरोना भाइरस संक्रमितको २३०० पुगे संगै जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न बाटो खुलेको बताए। जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ।
कोभिड-१९ हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’मा सरकारले कोभिड-१९ का सक्रिय २ हजार केस पुगेपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मान्‍ने छ। हाम्रो सुरुकै योजनामा २ हजार एक्टिभ केस पुगेपछि हेल्थ इमर्जेन्सी लगाउने तयारी छ', उनले भने, 'हामीले आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं। पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा क्याबिनेटले गर्नुपर्छ। तर मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाका लागि मन्त्रालयको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । स्रोतले भन्यो, 'अब एक्टिभ केस दुई हजार नाघ्याे । हामीले हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरेर अगाडी बढेनौँ भने अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ ।
हामीले यसको तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ। यो समयमा विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरेको ग्लोबल इर्मजेन्सी र महामारीका सर्तहरु स्वत: लागू हुनेछन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४८ ले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ। के छ हेल्थ इमर्जेन्सीमा व्यवस्था? विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका स्थानका लागि टेलिमेडिसिन सेवा दिने उल्लेख छ। यदि १० हजार भन्दामाथि संक्रमित भएमा विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन अनुसार आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने त्यस निर्देशिकामा उल्लेख छ। आरडिटी परीक्षण विधिबाट मास स्क्रिनिङ गरिने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य आपतकालीन किट होम आइसोलेसनमा हुनेलाई उपलब्ध गराइने छ। होटलहरुबाट उपचारमा संलग्‍न स्वास्थ्यकर्मीका लागि खाना व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणासँगै संक्रमतिलाई घर या क्‍वारेन्टाइनमै राखेर लक्षण भएका संक्रमितलाई मात्रै अस्पताल लगिने छ। ५ हजार भन्दाबढी सक्रिय केस भएमा स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमितलाई मात्रै अस्पताल भर्ना गरिने उल्लेख छ। अन्यलाई भने घरमै क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍ने र समस्या भएमा मात्रै अस्पताल ल्याइने छ। सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहेअनुसार परिचालन हुन सक्ने छ।